Umgadli wele-PSL umataniswa neChiefs | News24
Umgadli wele-PSL umataniswa neChiefs
Durban - IKaizer Chiefs okungenye yamakilabhu ahlonishwayo ebholeni lakuleli imataniswa nomgadli ovutha engabaselwe kwi-Absa Premiership.
IziMpofana ziphumele obala ukuthi zisemkhankasweni wokuthungatha umgadli. Zikubeke kwacaca ukuthi zimfuna kuleli nangaphandle kwakuleli, kubika ILANGA.
Selokhu zimemezele ukuthi zifuna umgadli azikamtholi yize bekhona abafikayo bezozama inhlanhla kodwa bachithwe. Nalabo le kilabhu ebathengile kuqala isizini abakhombisi ukuba bukhali njengoba kuvele imibiko yokuthi khona abasazochithwa uma sekuvulwa iwindi lokudayiselana ngabadlali ngoJanuwari, okubalwa kubona uRyan Moon obesuka kwiMaritzburg United.
Leli phephandaba lihabule ngemithombo yalo engaphakathi kwiChiefs ukuthi umqeqeshi wale kilabhu uSteve "Mphathi" Komphela uphakamise igama likaRodney Ramagalela ongumgadli wePolokwane City ukuba athengwe yile kilabhu uma sekuvulwe leli windi lokudayiselana ngabadlali.
URamagalela uvutha engabaselwe kulezi zinsuku njengoba engalibheki ipali. Lo mdlali akamusha ebholeni lakuleli njengoba eke wasayiniswa yikilabhu enkulu kuleli iMamelodi Sundowns kodwa wangenza kahle kuyona.
OLUNYE UDABA: UPitso uphendule umdlali othe iSundowns inwabuluka kakhulu
Uqale ukugqama esedlalela iBlack Leopards nalapho agcine ebizelwa khona eqenjini lesizwe lika-Under 23 ngo-2011.
Leli phephandaba libuza uBobby Motaung oyinemenja jikelele yeChiefs ngalolu daba uthe: "Angeke ngikwazi ukuphawula ngabadlali abanezinkontileka namakilabhu abo.
"Ngingaqinisekisa ukuthi umgadli sisamdinga njengoba wonke umuntu azi ukuthi asikamtholi. Kodwa-ke lokho akusho ukuthi kufanele ngikhulume ngabadlali bamanye amakilabhu," kusho uMotaung.
URamagalela uthi angakujabulela ukuphinde athole ithuba lokugijima ekilabhini enkulu.
"OkweChiefs bekungakafinyeleli kimina kodwa lokho akuchazi ukuthi yinto engekho ngoba ngeke wazi yibhola leli. Kodwa-ke ngingakujabulela ukuphinde ngidlale ekilabhini enkulu.
"KwiSundowns angihlulekanga, angikholwa ukuthi nganikezwa ithuba alanele ukuzibonakalisa kuyona," kusho uRamagalela.
49% - 4278 votes